"သာသနာတော်၏ ပထမဆုံး လူ အရိယာ" - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
"သာသနာတော်၏ ပထမဆုံး လူ အရိယာ"
ကိုညီညီတင် မှ January 22, 2013 3:00pm တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား၏ သာသနာတော် ၌ လူသားပုဂ္ဂိုလ်ထဲတွင်ပထမဆုံးသောတပန်အရိယာဖြစ်သူမှာ "အရှင်ကောဏ္ဍည မထေရ်" ဖြစ်သည်။
မထေရ်ကြီးသည် ပထမဆုံးအရိယာဖြစ်သည်သာမဟုတ်သေး။ပထမဆုံး"ဧဟိဘိက္ခု"လည်းဖြစ်၏။ပထမဆုံး ရဟန္တာ ဖြစ်သူတို့ထဲ၌လည်းပါ၏။ ဤသို့ထူးခြား၏။ ထူးခြားရုံသာမဟုတ်၊အံ့သြဖို့လည်းကောင်းပါ၏။
အဘယ်သို့ နည်း။ "အရှင်ကောဏ္ဍညမထေရ်"သည်"အရှင်ဝပ္ပ"စသည့် "ပဉ္စ၀ဂ္ဂီ" အလောင်းအလျာတို့နှင့် အတူတောထွက်ခဲ့ကြ၏။
တရားအတူကျင့်ခဲ့ကြ၏။ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအထံတော် ၌ "ဓမ္မစကြာတရားတော်" ကိုလည်းအတူနာခဲ့ကြ၏။
သို့သော် အရှင်ဝပ္ပ စသူတို့မှာ ဓမ္မစကြာတရားတော်ကို နာပြီးပြီးချင်း တရားထူး မရကြ။ အရှင် ကောဏ္ဍည တစ်ပါးတည်းသာ ဦးဦးဖျားဖျား သောတပန် အရိယာ ဖြစ်ခဲ့၏။ထို့ကြောင့် အံ့သြဖို့ကောင်းသည်။
ထို့ထက် ပို၍ အံသြဖွယ်ကောင်းသည်မှာ- အရှင်ကောဏ္ဍညမထေရ် သည် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်နှင့် ပထမဦးဆုံး ဦးဦးဖျားဖျားတွေ့ဆုံရသူမဟုတ်ပေ။သူ့
ထက် စော၍ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်နှင့်တွေ့ကြုံသူများ ရှိပေသည်။
သူတို့ကား- ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင် ဘုရားဖြစ်ပြီးခါစ အဇပါလ ညောင်ပင်ရင်းတွင်"အဇပါလသတ္တာဟ"တွင်စံတော်မူစဉ်ကဖြစ်
ပါသည်။ "ဟုံဟုင်္က" အမည်ရ ပုဏ္ဏားတစ်ဦး ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ရှေ့တော်သို့ရောက်ရှိလာသည်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင် ထံ"သူမြတ်ဖြစ်ကြောင်းတရား"ကို မေးလျှောက်သည်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင် က ကျေနပ်ဖွယ်ဖြေရှင်းဟောကြားပေးလိုက်သည်။ ထိုသူ သောတပန် မဖြစ်ချေ။
နောက်"ဥက္ကလာဇနပုဒ်၊ပေါက္ခရ၀တီမြို့သား၊တပုဿ နှင့် ဘလ္လိက ကုန်သည်ညီနောင်"တို့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင် "ရာဇယတနသတ္တဟာ" စံတော်မူနေစဉ် အဖူးအမြော် ရောက်ရှိလာသည်။မုန့်ဆွမ်း ဒါနပြုကြ၏။ဆံတော်၊ဓါတ်
တော်မြတ်တွေ ရရှိကြ၏။ "ဒွေဝါစိကသရဏဂုံ" တည်သွားကြ၏။သို့သော် သူတို့လည်း သောတပန် အရိယာ
တစ်ဖန်"ပဉ္စ၀ဂ္ဂီ"ငါးဦးတို့အား ဓမ္မစကြာတရားဟောတော်မူရန် "ဗောဓိမဏ္ဍိုင်" မှ ၁၄၂ မိုင်ကွာ "မိဂဒါဝုန်" သို့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်အကြွ၊ လမ်းခရီး၌ "ဥပကတက္ကတွန်းကြီး"နှင့် ပက်ပင်းတွေ့၏။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်(ဇိန) အဖြစ် အတိအလင်းအသိပေးပါလျှက် ဥပကကြီး ပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောထားကာ ရှောင်ထွက်သွား၏။ဥပက
ကြီး သောတပန် အရိယာ မဖြစ်ချေ။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင် ၏ နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်တိုင်းသည် ဓမ္မချည်းဖြစ်ပါ၏။ သို့ပါလျက် "ဟုံသုင်္က၊တပုဿနှင့်ဘလ္လိက၊ဥပက"တို့သည် တရားနာယူလိုက်ကြရပါလျက် အရှင်ကောဏ္ဍည
မထေရ် ကဲ့သို့ သောတပန် အရိယာဖြစ်မသွားကြပါပေ။
အရှင်ကောဏ္ဍညမထေရ် တစ်ပါး တည်းသာ ထူးထူးခြားခြား ဦးဦးဖျားဖျား သောတပန်အရိယာဖြစ်လေသည်။
နောက် လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးလည်း သောတပန်အရိယာ ဖြစ်သွားပါသည်။အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်မှာ ထိုပုဂ္ဂိုလ် သည် အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင် နှင့်လည်း မတွေ့ဖူးလိုက်ပါ။
ထို အမျိုးသမီးပုဂ္ဂိုလ် သောတပန် အရိယာ ဖြစ်သွားပုံ မှာ ဤသို့ဖြစ်ပါသည်။ "မိဂဒါဝုန်"တွင် ပဉ္စ၀ဂ္ဂီ တို့အား ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တရားဦး ဓမ္မစကြာတရားတော် ဟောတော်မူသောအခါ
လောက ၌ အံ့သြနိမိတ်ကြီး ၃၂-ပါး တို့ပေါ်ထွန်းခဲ့၏။၎င်း ကို "သာတာဂိရ-နတ်ဘီလူး"က သိသည်။
ကောင်းမြတ်သောတရားတော်ကိုနာကြားနေရစဉ် မိမိ၏သူငယ်ချင်း "ဟေမ၀တ-နတ်ဘီလူး"ကိုအမှတ်ရသည်။ အထူးအဆန်းတွေ့ကသတင်းပေးကြစတမ်း ဟု ရှေးက ကတိက၀တ်ရှိထားကြသည့်အတိုင်း "ဟေမ၀တ"ကို
သတင်းပေးရန် တရားနာရင်းတန်းလန်းမှ ထ ပြန်လာခဲ့၏။
ထို အချိန် "ဟေမ၀တနတ်ဘီလူး" ကလည်း ဟိမ၀န္တာ ၌ မဖြစ်ဘူးမြဲ ထူးကဲသောဖြစ်ရပ်ဆန်းများဖြစ်ပေါ်နေ ဖြင့် "သာတာဂိရ"ကို သတင်းပေးရန်လာ၏။သူတို့နှစ်ဦး ရာဇဂြိုလ်မြို့(ကောင်းကင်ပေါ်) ၌ ဆုံကြသည်။
"သာတာဂိရ" က ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင် နှင့် တရားတော်၏ဂုဏ်ကျေးဇူးကို ဖွယ်ဖွယ်ရာရာပြောပြပြီး တရားနာရန် ဖိတ်ခေါ်သည်။"ဟေမ၀တ" က အထပ်ထပ်စုံစမ်းသည်။စိစစ်သည်။စုံစမ်းလေ၊စိစစ်လေ၊ဂုဏ်တော်များကပိုမိုပေါ်
လွင် ထင်ရှားလေ ဖြစ်လာသည်။
သူတို့၏ ဆွေးနွေးသံကို (မူလ က ရာဇဂြိုလ်သူဖြစ်လျက် ကုရရဃရမြို့သား နှင့် အိမ်ထောင်ကျပြီး အရှင်သော ဏကုဋိကဏ္ဏ လောင်းလျာ ကိုယ်ဝန်ကို မွေးဖွားရန် ရာဇဂြိုလ်ရှိ မိဘအိမ်သို့ရောက်ရှိနေသူ)"ကာဠီ"အမျိုးသမီး
သည် ပြသာဒ် အပေါ်ထပ် လေညင်းခံရာမှ အတိုင်းသားပီပီသသ ကြား၏တစ်ဆင့်ကြားဖြင့် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလည်းကေင်း၊တရားတော်ကိုလည်းကောင်းအလွန်ကြည်ညိုသဒ္ဒါတရားဖြစ်၏။စိတ်ရွှင်လန်းတက်ကြွလေသည်။ဗုဒ္ဓ၊ဓမ္မ အာရုံ မှတစ်ပါး တခြားအာရုံ မရှိ။ထိုအခါ နီဝရဏ တို့ပါးလျားသွားသည်။၎င်းစိတ်ဖြစ်စဉ်ကို ၀ိပဿနာရှုပွား၊လက္ခဏာရေးတင်ကာ မဂ်ဖိုလ်ဆိုက်သွားသည်။
ထိုအမျိုးသမီး မှာ နောင်သော် "အနုဿဝပသာဒ ဧတဒဂ်" ရ "ကာဠီ"အမျိုးသမီး ဖြစ်ပေသည်။
မှီငြမ်း ကျမ်းကိုး- ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ဒီဇင်ဘာလထုတ်၊ "ဓမ္မရံသီ ဓမ္မမဂ္ဂဇင်း"မှ"ဆရာ ဦးကျော်စိန်"၏"ပထမဆုံး လူအရိယာ"အမည်ရ ဆောင်းပါးများကို မှီငြမ်း၍ ,ပြန်လည်,မျှဝေ,ဓမ္မဒါနပြုခြင်းဖြစ်ပါသည်)
မှတ်ချက်။ ။ ဤဘလော့ဘ်ပို့စ်အား မဖတ်ရသေးသူများ၏ဗဟုသုတအကျိုးငှာရည်ရွယ်၍မျှဝေဓမ္မဒါနပြုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဖတ်ပြီး, သိပြီးသူများ,အတွက်အနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါသည်။ Views: 118
ဘလော့အမျိုးအစား(ဓမ္မ, ဗဟုသုတ, ဘာသာရေး) Like3members like this
ဝိ သု ကြုံ (အသေမဦးခင်) သည် January 28, 2013 က 3:33pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ သာဓု . . . သာဓု . . သာဓု zatila2010 သည် January 22, 2013 က 6:27pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ ချမ်းသာပါစေ၊အေးငြိမ်းပါစေ၊ RSS
9. "ကိုရင်လေး ပေမယ့် အထင်မသေးစေချင်လို့ပါ"
11. ဥပုသ်သီလ ဆိုသည်မှာ
12. မီးလွတ်ကျင့်စဉ်တဲ့ ?
20. "မေးမြန်းစူးစမ်း၊ဓမ္မလမ်း” (အက်ဒ်မင် ကိုညီညီတင်နှင့် အက်ဒ်မင် ဆရာတော်အရှင်ဝဏ္ဏတို့၏ အင်တာဗျူးအစီအစဉ်)
Top News · Everything မူကြိုဆရာ သည် ဘလော့တင်သွားပါသည်။ဆုတ်ခေတ်ဆုတ်ခေတ်“ငါ့ဘ၀ဟာ တကယ်တော့ သူများအတွက် နေခဲ့တာပါ”7 more…3 hours agoSoe Gyi shared dimplemit's blog post on Facebookသီလညစ်နွမ်းခြင်း၏ အကြောင်းငါးပါး5 hours agoSoe Gyi liked dimplemit's blog post 'သီလညစ်နွမ်းခြင်း၏ အကြောင်းငါးပါး'5 hours agoSoe Gyi shared မူကြိုဆရာ's blog post on Facebookဝေဒနာနဲ့ဗုဒ္ဓဓမ္မ5 hours agoSoe Gyi liked မူကြိုဆရာ's blog post 'ဝေဒနာနဲ့ဗုဒ္ဓဓမ္မ'5 hours agoanatta liked ကောင်းမြတ်မင်း's blog post 'ဗုဒ္ဓကမ္ဘာဆိုဒ် စတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ'7 hours ago၄၄၂ဇော်နိုင် commented on စိုးလေး's blog post 'မဂ္ဂင်(၈)ပါး တရားတော်အကျဉ်း'"ကျေးဇူးပါ ကော်ပီကူးသွားလိုက်ပါတယ်"8 hours agoaung aung soe commented on မူကြိုဆရာ's blog post 'လေးအသင်္ချေနှင့် ကမ္ဘာတစ်သိန်း'"ကျေးဇူးတင်ပါတယ်"8 hours agoကောင်းမြတ်မင်း and Khun Lar Taung are now friends8 hours agoanatta သည်ဘလော့တင်သွားပါသည်။ဘုရားရှင်အား ဖူးမြင်လိုပါသလား?အန္ဓ ပုထုဇဉ်တို့ သည် ပညာမျက်စိ မရှိကြသောကြောင့် (တစ်နည်း) မိုဟ် (မောဟဖုံး) သောကြောင့် ပညာဥာဏ်…See More9 hours ago 0
padout liked dimplemit's blog post 'သီလညစ်နွမ်းခြင်း၏ အကြောင်းငါးပါး'9 hours agopadout liked မူကြိုဆရာ's blog post 'ဝေဒနာနဲ့ဗုဒ္ဓဓမ္မ'9 hours ago More... RSS